musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » ProCare Hutano yakawanikwa neClingene Holdings
Clinigence Holdings, Inc., imwe yemakambani anotungamira tekinoroji-anogonesa, ane njodzi-anotakura hutano hwehuwandu hwevanhu, nhasi yazivisa kuti yapedza kutora kweProCare Health, Inc.
Yakavakirwa muGarden Grove, California uye yakavambwa muna 2011, ProCare isangano rinotungamira manejimendi masevhisi ("MSO") iro parizvino rinopa masevhisi kune rimwe sangano rekuchengetedza hutano ("HMO") uye matatu akazvimirira masangano echiremba ("IPAs") muSouthern uye. Northern California. MaMSOs ndeemabhizimusi masangano anopa anodiwa ekugadzirisa matekinoroji uye tekinoroji yengozi-inotakura IPAs kuti ibudirire muhukama hwavo nevane chibvumirano vanobhadhara uye vamiriri veanodzora. MaMSO anogonesa masangano echiremba kuti abudirire mukufungidzira kwemari uye huwandu hwevanhu, kuvandudza mashandiro esangano mukuchengetwa kwekuchengetedzwa uye nekupa inoitisa data analytics. ProCare inopa manejimendi manejimendi, kutevedzera, humbowo, manejimendi emhando, manejimendi ekushandisa, chibvumirano, hukama hwevanopa, masevhisi enhengo, manejimendi ekutarisira, kukodha optimization uye masevhisi ekuzivisa zvemari, pakati pemamwe masevhisi.
Pasi pechibvumirano chekutenga masheya, Clinigence yakapa 759,000 migove ichangoburwa yezvakajairwa kune vane masheya eProCare pakuvhara vachichinjana nezana muzana rezvibatiso zvakasarudzika zveProCare. Pamusoro pezvo, chimiro chemari chakaiswa panzvimbo yekupa mubayiro ProCare chero zvibvumirano zvitsva zveMSO mune ramangwana.
"Kutorwa kweProCare chikamu chehurongwa hwedu hwekukura uye kunotitendera kuti tiwedzere kuwedzera portfolio yedu muchikamu cheMSO," akadaro Warren Hosseinion, MD, Sachigaro uye Chief Executive Officer. "Tinofara kugamuchira timu yeProCare, ine hunyanzvi uye shungu zvichasimbisa kambani yedu."
"Tinofara kubatana neClinigence, ine timu yemaneja ine makore anopfuura zana mune ruzivo rwakabatanidzwa muchikamu ichi," akadaro Anh Nguyen, Muvambi uye Chief Executive Officer weProCare Health. "ProCare iri pamberi pekuchengetedza, yakatarisana nekushandiswa kwekushandisa, njodzi-yakagadziriswa chirwere stratization uye kubatsira vanopa rubatsiro mukuendesa hutano hwakanaka kuvarwere vavo."